आजको राशिफल (वि.सं. २०७८ श्रावन १७ गते, आइतबार) - Rastrakokhabar
आजको राशिफल (वि.सं. २०७८ श्रावन १७ गते, आइतबार)
पहिलेका कमजोरी सुधार्दै जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउन सक्छ। सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्व निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। खर्च लागे पनि दोहोर्याएर प्रयास गर्दा रोकिएको काम बन्नेछ। अरूका विषयमा चासो लिँदा आफ्नो सूचना बाहिरिन सक्छ, गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला। खानपान र भोगविलासमा मन रमाउनेछ।
चुनौतीपूर्ण कामको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। स्वास्थ्यका लागि आहार–विहारमा सजग रहनुपर्ने समय छ। व्यस्तता बढ्नेछ भने स्वास्थ्य समस्याले कमजोरी अनुभूति हुनेछ। सम्भावना देखिए पनि उपलब्धि प्राप्त गर्न समय लाग्नेछ। परिस्थितिको चक्रमा अलमलिनुपर्ला। खर्च बढ्नुका साथै अर्थ अभाव देखापर्न सक्छ। आम्दानीका स्रोत भने कमजोर बन्नेछन्।
केही समस्या देखिए पनि आँटेको काम सम्पादन हुनेछ। साथीभाइसँगको असमझदारी सम्झौतामा टुंगिनेछ। दिगो योजनाका साथ अघि बढ्दा बिस्तारै लाभ मिल्नेछ। अरूको व्यवहारले शंका उब्जाए पनि शुभचिन्तकहरूको साथ प्राप्त हुनेछ। आजको मिहिनेतले भविष्यमा फाइदा दिनेछ। अर्थ अभाव भए पनि तत्कालको खाँचो टर्नेछ। बाेलीकाे प्रभावले काम बन्नेछ।